Tsy ho ela ianao dia ho afaka handefa horonantsary amin'ny WhatsApp | Vaovao momba ny gadget
Vetivety ianao dia ho afaka handefa horonantsary amin'ny WhatsApp
Raha vao andro vitsivitsy lasa izay ny developer dia WhatsApp nanavao ny fampiharana fanta-daza hanolorana ny mpampiasa rehetra ilay fiasa nandrasana hatry ny ela izay mamela ny fanaovana antso an-tsary, ankehitriny, mampiseho indray mandeha fa ny video dia nanjary endrika tian'ny mpiara-monina iray manontolo, nanambara izy ireo fa tsy ho ela dia hanana ny fahafaha-manao isika. mandany horonan-tsary.
Tsy isalasalana fa ity dia vaovao mihoatra ny mahaliana ihany satria, noho io fiasa vaovao io, ireo mpampiasa rehetra izay mampiasa WhatsApp dia afaka milalao karazana atiny horonantsary rehetra nefa tsy mila misintona azy teo aloha, satria tsy maintsy ataontsika hatreto. Misaotra an'ity fa vitantsika mitahiry habaka fitehirizana betsaka amin'ny finday avo lenta.
WhatsApp dia mizaha ny safidy playback video streaming amin'ny beta farany.
Ity vaovao ity dia navoakan'ny haino aman-jery marobe mifandraika amin'izany any India, izay toa hita fa ao anatin'ny dingana fitsapana ny fampiharana any amin'ny faritra misy anao mba hanatsara ny fomba fiasa vaovao. Raha atao antsipiriany dia lazao anao fa ao amin'ny beta kinova 2.16.365 amin'ny fampiharana WhatsApp ho an'ny Android. Amin'izao fotoana izao dia tsy fantatra ny fotoana hanombohany hiasa amin'ny iOS ihany koa.
Araka ny hitanao amin'ny sary eo am-piandohan'ny lahatsoratra mitatra, miaraka amin'ity fiasa vaovao ity, ankoatry ny fisehoana ny bokotra download, nahita sary masina ihany koa izahay Play eo afovoan'ny horonan-tsary hidirana amin'ny streaming playback. Eo am-pijerena ny atiny dia asehon'ny rafitra amintsika ny habetsaky ny horonan-tsary nampidirina tao amin'ny bara farany ambany, ary rehefa tapitra ny sary dia azo lalaovina indray.
More Information: Ny fanahy Android
Làlana feno mankany amin'ny lahatsoratra: Vaovao momba ny gadget » General » Software » Vetivety ianao dia ho afaka handefa horonantsary amin'ny WhatsApp
Ny Xiaomi Mi Mix nano dia ho tonga mandritra ny volana Desambra
Vondronà mpahay siansa dia mampanantena bateria iray manana fizakan-tena mandritra ny herinandro maromaro